Ahoana ny fanatsarana ny fiainana manokana amin'ny mombamomba anao WhatsApp. Androidsis
WhatsApp dia fampiharana izay ampiasainay isan'andro. Na dia sehatra iray foana aza ny tsiambaratelo izay misy toerana tokony hivoarana. Ny tena izy dia afaka manao zavatra momba azy isika, mba hahafahantsika mampiasa ilay fampiharana amin'ny fomba mitokana sy milamina kokoa ho antsika, amin'ny alàlan'ny tetika tsotra vitsivitsy.
Amin'izany no ahafahantsika mampiasa ny rindranasa amin'ny Android ara-dalàna, manararaotra ny asany maro, fa amin'ny fomba somary mitokana. Avelanay miaraka amin'ny sasany ianao fika tsotra hanatsarana ny fiainana manokana amin'ny WhatsApp amin'ny findainao Android.
1 Afeno ny fifandraisana farany
2 Afeno ny sarin'ny piraofilina
3 Esory ny tapakila manga roa sosona
4 Atsaharo ny toerana
Afeno ny fifandraisana farany
WhatsApp dia mety mahita ny fifandraisantsika rehefa nifandray farany izahay. Na dia zavatra mety mandeha tsara aza izy io dia miteraka ady. Satria mety niditra tao anaty app vetivety ianao tamina zavatra iray, ary misy mieritreritra fa tsy fanahy inianao ny mamaky ny hafatr'izy ireo. Amin'ny tranga maro, ny fanafoanana ny fotoana anaovana ity fifandraisana farany ity, ka tsy misy mivoaka avy ao aminy, no tsara indrindra.
Ny fanafenana an'ity fifandraisana farany ity amin'ny fampiharana dia tsotra, fa efa nasehonay anao. Tokony hiditra ny fikirakirana WhatsApp aloha isika ary avy eo mandehana any amin'ny fizarana kaonty. Ao no ahitantsika ny faritra miafina. Ao anatiny no safidy farany farany, ahafahantsika mamono azy io. Ka tsy hisy hahita ny fotoana nifandraisantsika farany tao amin'ilay app.
Ny safidy tsara indrindra amin'ny WhatsApp ho an'ny Android
Afeno ny sarin'ny piraofilina
WhatsApp dia mamela antsika handrindra lafin-javatra roa mifandraika amin'ny fiainana manokana arak'izay tiantsika. Ny fampiharana dia mamela ny sarin'ny mombamomba anay ho zavatra iray izay tsy hitan'ny mpampifandray anay irery. Ka raha misy olona manana ny nomeraon-telefaonantsika, fa tsy mifandray, Tsy ho hitako ilay sary voalaza ao amin'ilay application. Azonao atao ihany koa ny manao toy izany amin'ny fanjakana ao amin'ny fampiharana, izay fifandraisana ihany no mahita azy ireo. Izy ireo dia fomba tsotra roa hiarovana ny tsiambaratelo.
Tokony hanokatra ny fikirakirana WhatsApp izahay ary avy eo mankany amin'ny faritra Account. Ao anatiny no hidirantsika ny toerana miafina. Mahita safidy maromaro isika ao, ny iray amin'izy ireo dia ny sary misy ny mombamomba. Rehefa manindry dia hiseho ny fikandrana vaovao, izay hisafidianana iza no afaka mahita ny sary momba anay amin'ny fampiharana (fifandraisana, olona rehetra na tsy misy), mba hahafahantsika misafidy ny safidy mety indrindra amintsika.
Podemos avereno izany amin'ny fampahalalana momba ny mombamomba sy ireo satan'ireo. Ao amin'ny sehatry ny fiainana manokana no ahitantsika ireo safidy rehetra ireo, izay avelan'ny WhatsApp hamboarintsika, mba ny fifandraisana aminay ihany, ireo izay ananantsika ao anatin'ny fandaharam-potoana, no afaka mahita ity fampahalalana ity. Ka ny mpampiasa tsirairay avy dia afaka misafidy ny safidy toa mahaliana azy indrindra.
Ahoana ny fomba hahitanao ny toetoetran'ny fifandraisanao WhatsApp raha tsy fantatr'izy ireo
Esory ny tapakila manga roa sosona
Ao amin'io fizarana io ihany no ahitantsika safidy mahaliana iray hafa ho an'ireo mpampiasa WhatsApp. Ny tapakila misy ny tapakila manga mety hahasoa eo am-piandohana, rehefa manomboka mampiasa ilay rindranasa isika. Na dia zavatra mahasosotra aza ny fiafarany dia miteraka fifandonana izany ary ahafahan'ny olona iray hafa hahafantatra fa namaky ilay hafatra isika, na dia angamba tsy tiantsika ho fantatr'izy ireo aza. Noho izany, azontsika atao ny mamono azy amin'ny fampiharana.
Tokony hiditra ny toe-javatra WhatsApp ary avy eo ampidiro ny fizarana kaonty. Indray mandeha indray, miditra ny sehatra tsiambaratelo isika ary eo dia misosa mandra-pahatongantsika ny safidy farany ao amin'ilay lisitra. Ireo dia tapakila voavaky, izay ampidirina ao anaty ny rindranasa. Satria tsy tiantsika ny hamoahana an'io tsipika manga roa sosona io dia mila esorintsika io asa io amin'ny alàlan'ny fanindriana ny switch. Amin'izany fomba izany, raha misy mandefa hafatra amintsika ary novakiana izy, dia tsy hiseho ao aminy ireo marika roa sosona ity. Olana maro tokoa no hialana amin'ity fiasa ity amin'ny fampiharana malaza.
Atsaharo ny toerana
Lafiny iray hafa izay tsy maintsy raisintsika amin'ny fampiharana dia ny azo atao ny mampihetsika ny asan'ny toerana tena izy. Andininy izay azo antoka fa tsy tian'ny mpampiasa maro amin'ny WhatsApp. Soa ihany, manana ny safidintsika hanafoanana io asa io amin'ny fotoana rehetra isika. Mba tsy hananan'ilay fampiharana an'ity fampahalalana ity amin'ny fotoana rehetra. Hiverina indray isika any amin'ny faritra miafina amin'ny fampiharana.
Manokatra ny fikirakirana fampiharana izahay ary miditra ny fizarana kaonty. Aorian'izay dia miditra ao amin'ilay faritra miafina isika, izay hidinantsika mankanesa any amin'ny faritra misy azy amin'ny fotoana tena izy. Ao anatiny no ahafahantsika mamono ny toerana voalaza, ka manakana ny fampiharana tsy hahafantatra hoe aiza isika amin'ny fotoana rehetra. Izy io dia midika iray manokana momba ny fiainana manokana rehefa mampiasa WhatsApp amin'ny telefaona Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fanatsarana ny fiainana manokana amin'ny WhatsApp
Ahoana ny fomba hahitana bisikileta manofa ao an-tanànanao amin'ny Google Maps